सोलु एफ एम
असार १, २०७४
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सातै प्रदेशले आज आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन् । सातै प्रदेशका सभा बैठकमा पहिलोपटक बजेट पेश गरिएको हो ।
प्रदेश एक नम्बर प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक २०७५र७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेट मध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख अर्थात ५१ दशमलव ५ प्रतिशत र चालु तर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख अर्थात ४१ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
यसैगरी बजेटमा अन्तर सरकारी हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अनुदान २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने नौ अर्ब १८ करोड ११ लाख र आन्तरिक राजस्वबाट तीन अर्ब ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने आँकलन गरिएको छ ।
मन्त्री आङ्बोले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामि पाँच वर्षमा १५ सय मेगावाट, १० वर्षमा तीन हजार र १५ वर्षमा चार हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। जसका लागि प्रदेश स्तरमा जलविद्युत् लगानी कम्पनी गठन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले जलविद्युत्को विकासका लागि ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै उद्योगको विकासका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विराटनगर आसपासको क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर र व्यापारिक हवको रूपमा विकास गरिने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने, प्रदेशको राजधानीमा कम्तीमा ५०० शैयाको सुविधान सम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा १०० शैया र गाउँपालिकामा १५ देखि २५ शैयासम्मको अस्पताल स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशले एक अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै खेलकुदको विकासका लागि ४३ करोड, आवास तथा भौतिक पूर्वाधारका लागि नौ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वन, वातावरण संरक्षण, सरसफाई र खानेपानीमा दुई अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सद्भाव, संस्कृति र एकताका लागि एक अर्ब २९ करोड रकम विनियोजन गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बताउनुभयो ।
यस्तै, प्रदेश २ ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र ७६ का लागि २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालु तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा १० अर्ब ४८ करोड, ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपुग भएको १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, प्रदेश ३ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमका लागि यो रकम विनियोजन गर्नुभएको हो । ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख मध्ये चालु खर्च १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख र पुँजीगत खर्च २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख रुपैया बिनियोजन गरेको प्रदेश ३ को सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रदेश ४ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आज आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमका लागि यो रकम विनियोजन गरेका हुन ्।
कुल विनियोजन रू. २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख मध्ये चालुतर्फ ६ अर्व ९१ करोड ५५ लाखः २९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रू १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख बजेट पेश गरिएको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश ५ ले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २८ अर्ब ९ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। विनियोजन गरिएको रकमको झण्डै ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा छुट्याएको छ। बजेटमा ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख चालु खर्चको लागि छुट्याइएको छ। चालु वर्षको लागि ४० प्रतिशत रकम छुट्याइएकोमा पुँजीगत खर्चको लागि १६ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख अर्थात ५९.२० प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आज कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सदनमा अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको लागि यो रकम विनियोजन गरेका हुन ्।
२८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार मध्ये चालु खर्च ६ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगत खर्च २१ अर्ब २४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सरकारले आव २०७५÷०७६ का लागि रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख एक हजार अर्थात ५३ दशमलब २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात ४६ दशमलब ७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
श्रोत ः अनलाईनखबर, थाहाखबर